Fiarabe iray ana orinasa iray ao Maevatanana hiakatra aty Antananarivo no tra-doza, tao amin’ny tetezan’i Mitsinjo. 13 km tsy hidirana io tetezana io no nivadika tany an-kady ilay fiarabe. Mpamily iray no maty tsy tra-drano, raha naratra kosa ny mpanampy mpamily niaraka taminy. Nentina niakatra haingana taty an-drenivohitra io naratra io ary mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha amin’izao. Araka ny fanazavana azo, nitohana ora maromaro vokatr’izay ny fifamoivoizana tany an-toerana saingy efa nizotra am-pilaminana taorian’ny fahatongavan’ny zandarimaria tao Maevatanana, izay nanokatra ny fanadihadiana mikasika io lozam-piarakodia io.